Wirra Wirra RSW Shiraz 2016 Wine (TW60273) ~ ICT.com.mm
HomeWirra Wirra RSW Shiraz 2016 Wine (TW60273)
Wirra Wirra RSW Shiraz 2016 Wine (TW60273)
Country: Australia Wine Style: Red-Rich and Intese Region: McLaren Valley B0ttle Size: 750ml Winery: Shiraz Vintage: 2016 Alc: 14.7% ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် Wirra Wirra Vineyards ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Wirra Wirra RSW Shiraz (2016) ဝိုင်... [Learn more]
Brand: The Warehouse MyanmarSKU: 182231N/ASee more: Add-ons, Beers, Wine & Spirits, Products, Recent Updates, Shop, The Warehouse Myanmar, The Warehouse MyanmarFilter by: TWM, Wine
Wine Style: Red-Rich and Intese
B0ttle Size: 750ml
ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် Wirra Wirra Vineyards ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Wirra Wirra RSW Shiraz (2016) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတောင်ပိုင်း နာမည်ကျော်ဝိုင်စိုက်ပျိုးရာဒေသဖြစ်တဲ့ McLaren Vale ဒေသမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ ပြင်သစ်မျိုးရင်း ဝိုင်နီစပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ‘Shiraz’ စပျစ်သီး စစ်စစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 14.7% အထိရှိပြီး Red-Rich and Intese ဝိုင်နီ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသားဟင်းလျာနဲ့ သမင်သားကဲ့သို့ တောကောင်သားဟင်းလျာတွေဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်သည့် ဩစတြေးလျဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။
Wirra Wirra RSW Shiraz 2016 Wine
Wirra Wirra's flagship Shiraz has won many accolades over the years, including the 'world's best Shiraz'. It's loaded with distinctive McLaren Vale blueberry and chocolate characters, supported by plums, violets and spice, and tannin structure destined for 10 more years in the cellar.
This item: Wirra Wirra RSW Shiraz 2016 Wine (TW60273) K205,000